Ibhedi yaseGreen Valley kunye nesidlo sakusasa - I-Airbnb
Ibhedi yaseGreen Valley kunye nesidlo sakusasa
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguRajendra
Indlu entsha apho yonke into icoceke kakhulu kwaye ikhululekile.
I-Wifi egqibeleleyo, amanzi ashushu, i-Rooftop terrace enemibono yetempile yeMonkey, ihlathi eliluhlaza kunye nentlambo. Indlu yethu iphantsi nje kweShivapuri-Nagarjun National Park ibonelela ngomoya omtsha kude nesiphithiphithi sesiXeko, nangona iThamel ikumgama wokuhamba.
Ukuhamba okufutshane kukuthatha ukuya eJamacho ukusuka apho uyakonwabela umbono we-Himalayan.
Indawo esihlala kuyo ikufuphi neSharminub kunye neTriten Monastery.
Indlu inomgangatho weplanga kumagumbi okulala, igumbi lokuhlala kunye nezinyuko. Uphahla olunelanga elinombono wetempile eyaziwayo yeMonkey kunye nembono yentlambo, indawo entle yokuziqhelanisa neyoga. Umoya omtsha njengoko indlu yethu iphantsi nje kweShivapuri-Nagarjun National Park. Kukho inani leenketho zokuhamba okufutshane kufutshane.
Le ngingqi ingqongwe ziiMonasteries ezifana neSharminub Monastery, iTriten Monastery.
Kungekude neDolophu ( 9 K.M ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe kunye ne-4 K.M ukusuka eThamel ) intle kwaye izolile apha.
Ukufikelela ngokulula kwezothutho njengesikhululo sebhasi kunye nesikhululo seteksi kumgama wemizuzu emi-5. Sikwabonelela ngezinto zothutho zaBucala xa ucelile
Kukho iivenkile kunye neecafe ezikufutshane ukuba ufuna ukuthenga kancinci.
Sinekhitshi losapho labucala apho wamkelekile ukuba uhlanganyele nathi kwizidlo. Nangona kunjalo, kukho ikhitshi elaneleyo kwindawo yeendwendwe enazo zonke izinto eziluncedo onokuthi uziphekele ukutya kwakho. Ungasebenzisa umatshini wokuhlamba iimpahla ngaphandle kwentlawulo.
Mna ngokwam-uRajendra Lamichhane (uRaj) kunye noMfazi wam-Diya, baqhuba iHomestay yethu kunye namagumbi kwindlu enemigangatho emithathu eRaniban, eNagarjun Kathmandu. Undwendwe lunokubhukisha ixesha elifutshane lokuhlala kunye nexesha elide ngokunjalo.
Siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kunye nokwabelana ngenkcubeko, ukutya kunye namava okuhamba.
Ndisebenza kwezoKhenketho kwaye ndonwabile ukunceda undwendwe lwethu ukuba lucwangcise utyelelo lwalo malunga neNepal.
Uya kuhlala nathi njengelungu losapho nangona uya kuba nemfihlo yakho
Mna ngokwam-uRajendra Lamichhane (uRaj) kunye noMfazi wam-Diya, baqhuba iHomestay yethu kunye namagumbi kwindlu enemigangatho emithathu eRaniban, eNagarjun Kathmandu. Undwendwe lun…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nagarjun